प्रचण्ड, बावुराम, विप्लव र वैद्यले आत्म आलोचना गरौँ, अनि बन्छ माओवादी ! – Hamropahuch
नलगाड नगरपालिकामा ५६ करोड ८६ लाख ८४ हजारको बजेट
कुशे गाउँपालिकामा ४८ करोड २९ लाख ७४ हजारको बजेट
छेडागाड नगरपालिकामा ६७ करोड २१ लाखको बजेट
मुख्यमन्त्रीलाई गृहजिल्लामै कालो झण्डा
भेरी नगरपालिकाको नवौं नगरसभा उद्धघाटन ( फोटो फिचर)
नलगाड नगरपालिकाले ५६ करोड ८६ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तावित
राट्रपतिद्धारा राष्ट्रियसभाको बैठक १७ गतेका लागि आह्वान
नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा वडाध्यक्ष द्धारा इन्जिनियरमाथि आक्रमण
जाजरकोटकी एक महिलाको भारतमा बलात्कारपछी हत्या
प्रचण्ड, बावुराम, विप्लव र वैद्यले आत्म आलोचना गरौँ, अनि बन्छ माओवादी !
हाम्रो पहुँच संवादाता ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
घाइते परिवार जनयुद्धमा साथ दिने जनमुक्ति सेना र जनतालाई धोका दिएर घमण्डको पार्टी । हजारौं हजार पार्टी खोलेर केही हुनेवाला छैन । एकपटक गहिरो आलोचनात्मक समिक्षा गर्नु होस् त ? पहिला र अहिले हामी कस्तो छु । भनेर अध्ययन गर्नु त नेतृत्व भनिएहरु अलिकति लाज घिन छ भने समिक्षा गरौं त ? अनि मात्र हाम्रो देशमा माओवादी कम्युनिष्ट उदयमान हुनेछ ।
सबै नेतालाई फेसबुक पेज मार्फत सुझाव र अपिल गर्दछु । अब आउने नया आगामी दिनमा विचार, राजनीति, संगठनात्मक संरचनालगायत बारे नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने बढाउने सोच राखौ सोचौ उचित राय सल्लाह दिन मेरो आग्रह अपिल छ ।
अब आउने दिन कसरी माओवादी रुपान्तरण गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहिदहरु इज्जत कसरी राख्ने ? घाइतेहरुको इज्जत कसरी राख्ने जनताहरुको इज्जत कसरी राख्ने भन्ने बारेमा सोच्ने गराै‌ ।
प्रचण्डले हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) भनेर घमण्ड नगरे हुन्छ । वैद्यले हाम्रो गौरवशाली क्रान्तिकारी माओवादी भनेर घमण्ड नगरे हुन्छ । बाबुरामले हाम्रो गौरवशाली जनता पार्टी भनेर घमण्ड नगरे हुन्छ । विप्लवले हाम्रो गौरवशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेर घमण्ड नगरे हुन्छ । अन्य सबैले हाम्रो गौरवशाली पार्टी भनेर घमण्ड नगरे हुन्छ ।
सबै सच्चिएर आउनुपर्छ अहिलेसम्म कले कति गर्यो त्यतातिर होइन हामीले माओवादी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कहाँ लिएर जिम्मा दिदैछौं । हामी कहाँ फस्यौ सोच्नुहोस् त ? एकपटक आत्मै देखि दश बर्षिय जनयुद्धको दुःख र संघर्ष र बलिदान र योगदानलाई कसैले पनि भुल्ने कोशिस नगर्नुहोस् । आगामी दिनका लागि विचार, राजनीतिक, संगठनात्मक संरचना, घाइते अपाङ्ग एवं शहीद परिवार लगायत नेता कार्यकताको आचरण अनि व्यवस्थापन र जिम्मेवारीको बारेमा नयाँ ढंगले्् अगाडि बढाउने सोच राख्नुपर्छ ।
जनयुद्धको योगदान उचित ढङ्गले समिक्षा र सल्लाह सुझावको अगाडि बढ्नुहोस् । यसरी अगाडि बढिऔं भने मात्र नेपालको ठूलो राजनीति कम्युनिष्ट पार्टी बन्छ, होइन भने जहाँ जहाँ आफ्ना आफ्ना घर छन् त्यही गएर कुटो कोदाली गर्नुहोस् ।
पुजीँवादी व्यवस्थामा हातेमालो नगर्न सबैलाई अनुरोध छ । अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड यो पुरानो घिन लाग्दो व्यवस्थामा तपाई नेतृत्व गर्नु भएको छ । मनले नमान्दो रहेछ त्यसैले भेट नहोला । तपाईं पुरानो सडेगलेको व्यवस्थामा परिणत भएको कारणले हामीले भट्ने अधिकार त छैन होला पक्कै पनि तर पनि पुजीँवादी कमरेड प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, बिप्लब लगायत सबै कम्युनिष्ट एकताबद्ध एकृिकत माओवाद समालोचक भनेर अगाडि बढाै ।
सबै नेतृत्व आदरणीय माओवादी केन्द्र, माओवादी क्रान्तिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट र जनता पार्टी लगायत जनताको सुनौलो जनक्रान्ती र वैज्ञानिक समाजवाद एकताबद्ध भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौं । यहि मिडियाको माध्यमबाट आदरणीय सबै नेतृत्व कमरेडहरुलाई एउटा महान् क्रान्तिकारी योद्वा हुनुको नाताले तपाई सबैलाई ध्यानाकर्षण गर्नुहुनेछ भन्ने पुर्ण आशावादी छु ।
प्रचण्ड कमरेड तपाईंले पनि आज हाम्रो देश र नेपाली जनताको हक अधिकारहरुलाई हनन गर्दै केही मुठ्ठीभरका मान्छेहरुले तानाशाही रुपबाट कब्जामा लिएर शासन गर्न सुरु गरिरहेका छन् । त्यसैका पछि दिनुदिन चिच्याट किन गर्नुहुन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा तर सबै एक भएर हातेमालो हुन मेरो आग्रह छ ।
सबैले धोका दिनुभयो तर मात्र दुःख गरेर खाने हात पाखुरा बजारेर खाने जनतालाई सुन्दर देश नेपालको बारेमा धेरै चिन्ता लाग्छ । हाम्रो देश यो हुन्थ्यो भने दश बर्षे जनयुद्धमा हजारौं हजार जनता किन उतार्नु भयो ? कारण त प्रष्ट देखियो नि मात्र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र रहेछौं कमरेडहरु कारण म्यान यहीँ रहेछ तपाईंहरूको सोच ।
प्रचण्ड र बाबुराम कमरेड यसरी किन त्यही व्यवस्था लाई जोहो गर्नुहुन्छ । सबै नेतृत्व कमरेहरु तर हाम्रो देशमा यस्तो किन भइरहेको छ ? किन तपाईहरु त्यहीँ व्यवस्थामा होडबाजी गर्नु हुन्छ ? सबै नेतृत्व भनिएका कमरेडहरुको पुजीँवादी पछि लागेको नेताहरूलाई देशको बारेमा लाज छ भने अझै पनि देशमा अन्यायपूर्ण शोषण दमन देश बेचबिखन भइरहेको छ, दिनुदिन देश भ्रष्टाचारमा मौलाइ रहेका छन् ।
सिंगो नेपाल आमाहरु दिनुदिन रोइरहेका छन, दिनुदिन बलात्कार भएकि छिन् । अन्यायपूर्ण सत्यतथ्य आवाज उठाउ पुजीँवादी दलालका पछाडि लागेर किन भिक माग्दै हुनुहुन्छ कमरेडहरु अलिकति पनि लाज छैन ?
प्रचण्ड कमरेड र बाबुराम कमरेड नराम्रो सँग त फस्नु भयो तर अब कोही पनि नफस्नु होला हामी वैज्ञानिक समाजवादको निर्माणमा उद्यत लाग्नुपर्छ ।
हामी सबै दलाल पुजीँवादका विरुद्ध हाम्रो नेतृत्वले वैज्ञानिक समाजवादका म्यान प्रवक्ता हुन् अत्यन्तै महत्वपुर्ण आवश्यकता पनि छ । हामी सबैलाई दलाल पुजीँवादले बिचलनारात्मक बाटोमा लिन खोज्दैछन् । यस्तो हामीले मौन भएर किन सहनुपर्ने कारण त होइन नि ?
हामी त केवल सर्वहारा जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो महत्वपुर्ण दायित्वको आधारमा अहिलेको पुजीँवादी व्यवस्थालाई प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । बरु यसको प्रतिवादमा कसरी हुन्छ ? जसरी हुन्छ कट्टिवद्ध भएर लागांै । निरन्तर अगाडि बढाै । एकताबद्ध भएर अनि मात्र हाम्रो सत्यको आवाज जनताको आवाजले हामी अवश्य सफल हुन्छौं । सबै नेतृत्व एकताबद्ध भएर सबैभन्दा पहिले हाम्रो जनताको भबिष्य जब सुनिश्चित हुदैन् । तबसम्म कुर्सी र सत्ता माथी अधिकार जमाउनु कुनै हातमा हुदैन् ।
नेतृत्व कमरेडहरु अगाडिको कुर्सी र सत्ता भन्दा बरु पछाडिको सर्वहारा गरिब जनता आफ्नो क्रान्तिकारी युवाहरु तिर निरन्तर संघर्षको बाटो इतिहासको बाटो विस्तृत रुपबाट प्रस्तुत हुने गर्नु होस् । नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित भयो भनेपछि मात्र तपाईहरु नेतृत्व नेता कुर्सीमा बस्नु होला कमरेडहरु मेरो आग्रह र अनुरोध छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ । माओवादी आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन संघर्षको सुरुवात २०५२ साल फागुन १ एक गतेमा सम्झिएर फेरि ६२–६३ तिर फर्किएर अगाडि बढौं । जुन संघर्ष र विचलन पहिलो संविधानपछि समाप्त गरे । प्रचण्ड बाबुरामले समिक्षा गराै । कलिला युवायुवतीलाई जुन छाउनीमाथि धोका भयो । त्यो परिस्थिति नबल्झाउ भन्ने सोच्नुहोस् । एकपटक र सबै नेतृत्वलाई मात्र उदाहरण फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले आक्रमण गरेको थियो । त्यो आक्रमण असफल भएको थियो ।
यो असफलताले ठूलो विपत्ति ल्यायो । जीवित रहनुभएका मानिसहरुलाई बन्दी बनाइयो । मुक्त भएपछि उहाँहरुले फेरि सुरुदेखि क्रान्तिकारी संघर्षको सूत्रपात गर्नुभएको थियो हो । त्यस्तै गरेर हामीलाई सबै नेतृत्वले नबनाइयोस् ।
सही बाटो सही हातेमालो गर्नुभयो भने बिगत हामीलाई प्रचण्ड बाबुरामले उही पहिलाको प्रक्रियाको क्रममा युवायुवतीलाई नै आधारभूत तत्वको रुपमा बनाएको छ भन्ने सोच्दैनौं । बरु तपाईंहरूले हामीलाई धोका दिनुभएको यथार्थ हो । सबै कमरेडहरु अर्को उदाहरण छापामार युद्धको चरण आयो कुरा ।
जनयुद्धमा साथ दिएका सदस्यहरु विदेशको गल्ली गल्ती चोकचोकमा बितरण सिनामंगलस्थित बिदेशी युद्धलाई दुई भिन्न भिन्नै वातावरण अन्तर्गत पलायनसित गराउनुभयो । हो यहीँ दुई भिन्नभिन्नै सिनामंगलस्थित समृद्धि सतह वातावरणमा गराउनुभयो हामीलाई । एकातिर जनता महामारीले रुवाणडा छ, अर्कोतिर छापामारहरु रुवाणडा छन् ।
आखिर किन गरियो ? सबै नेतृत्वले समिक्षा गरौ त एकपटक त्यसबेलासम्म जनता र जनमुक्ति सेना प्रिय भए । अचेतन भीड लडेको गाई रामरामको रुपमा पार्नु भएको छ । नेतृत्व कमरेडहरु । सबैलाई उदाहरण जसलाई एकजुट पारी परिचालन गर्नु जरुरी थियो वा अर्कोतिर छापामारहरु बिचल्ली गर्नुमा क्रियाशील हुनुभएको हो हामी सात समृद्धबाट उत्तर खोजिरहेका छाै ।
तपाईंहरू त जनताका अगुवाका रुपमा चिनिनु भएन वा जनपरिचालनको प्रक्रियालाई अगाडि गलाउने इन्जिनको रुपमा लिनुभयो । जनता कार्यकर्ता जनमुक्ति सेना कलकार सबै सबैलाई । सबैलाई हामीले चेतावनी दिएर भन्छौं । हामीलाई उत्तर चाहियो क्रान्तिकारी चेतना वा जुझारु उत्साहका जनकका रुपमा वा विजयका लागि आवश्यक आत्मगत स्थितिको सिर्जना गर्ने उत्प्रेरक शक्ति वा यही अगुवा दस्ता पलायन के मा परिणत हुनुहुन्छ ? वा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन् भने कम्युनिष्टको बेइज्जती नगरे बरु आआफ्नो घर कहाँ हो खुरुखुरु कुदो कोदालो गरेकै बेश होला होइन भने जसरी आत्मा आलोचना गरेर एकताबद्ध होस् ।
नेतृत्व कमरेडहरु म यहाँ फेरि पनि जोड दिएर भन्छु । हाम्रो विचार–शक्तिलाई सुस्तरी–सुस्तरी सर्वहाराकृत रुप दिने कार्यमा वा हाम्रा वानी–व्यहोराहरु वा हाम्रा मन–मस्तिष्कहरुमा वा के भएर पुजींवादीमा केही कता कता गएर विचलन हुनुभयो कमरेडहरु अलिकति पनि लाज घिन छ ।
भने जनयुद्धमा यहीँ नौजवानहरुसँग प्यारा हुनुभएको थियोे । कमरेडहरु राम्रोसँग समिक्षा गर्नुहोस् । क्रान्तिमा त्यही हामी नौजवान व्यक्ति नै महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वको रुपमा चिनिएका थियो । के सोच्नु भएको छ हामीलाई नेतृत्व कमरेडहरुले चेतावनीका साथ भन्छु । प्रचण्ड,बैद्य,बाबुराम, विप्लब लगायत अरु ढुलमुले दही चिउरे नेतृत्व कमरेडरु अलिकति लाज घिन छ । भने तुरुन्तै माओवादी आन्दोलनमा हामीले धेरै ठूलो योगदान गरेका छौ, क्रान्तिकारी सशस्त्र सैन्य युवालाई तुरुन्तै उत्तर चाहिएको छ ।
जनयुद्धको शक्ति अन्तर्गतका माथिल्ला पदहरु पाउने सबै टुटफुट संघारमा माइस्त्राका प्रत्येक योद्धाहरुलाई विशिष्टरुपमा काम गर्न सक्नु भएन । हो यसमा हामीलाई पुर्णरुप र रुप्ले पुण्यजिन सोच्नेनिसन सर्प बटार्या झै कथा थाहा छ कि नाई कमरेडहरु म्यान हातमा लिन नसक्नु प्रचण्ड वैद्य बाबुराम विप्लब लगायत दही चिउरे नेतृत्वहरुले पनि धेरै गल्ती गरेका छौं । जनमुक्ति सेनालाई विचलित गर्ने कमान्डर नेतृत्वले झनै ठूलो गल्ती गरेका छौ । पार्साङ विप्लब, जनार्दन, र वल्देब लगायत सबै सबैले ठुलो धोका दिएका छाै ।
ठूलो नेतृत्वले जे भन्यो त्यहीपछि लाग्ने ठुलो कमजोरी कमान्डो नै हुन् । जनयुद्ध रातदिन नभेर लड्ने योद्धाहरुलाई धोका दिएका छन् । खबरदारी र चेतावनी दिन्छु । हाम्रो योगदान र कामहरुकै आधारमा उहाँहरुले ती पदहरु पाउनुभएको हो । कसैको नेतृत्वले घमण्ड नगरे हुन्छ । केही नेतृत्वविहीन तर विचलनमा पलायनमा परिणत भएका छन् । हाम्रो वीरतापूर्ण कालमा यिनै जनमुक्ति व्यक्तिहरुले महानतम् जिम्मेवारी र विशाल जोखिमहरुले भरिएका कर्तव्यहरु आफ्नो काँधमा लिई जनयुद्ध हामीले सफल पारेको हो ।
तपाईंहरू नेताले होइन सफल गरेको । हामीले आफ्ना कर्तव्यहरु पालना गर्नुलाई नै उहाँहरुले परम काटुन प्राप्तिको बाटोको रुपमा लिनुभयो साँचो कुरा हो । अन्य केही पुरस्कारको आशा गर्नुभएन पुजीँवादमा गएर बेइज्जती हुनुभयो । कम्युनिष्टको बेइज्जती गर्नुभयो । नेता कार्यकर्ता विस्तारै हराउँदै हराउँदै पलायनको बाटो देखाएर बेइज्जती गर्नुभयो । जनयुद्धको घाइतेको सामु बेइज्जती गर्नुभयो । सहिद परिवारको बेइज्जती गर्नुभयो ।
आफ्नै सहयात्री साथीहरूलाई जेल जीवन गरेर बेइज्जती गर्नुभयो । एमालेमा गएर बेइज्जती गर्नुभयो । सिंगो पार्टीको बेइज्जती गर्नुभयो । जनयुद्ध दुःख गरेको जनतालाई रोटमा अलपत्र पारेर बेइज्जती गर्नुभयो । माओवादी सिद्धान्त एजेन्डाको बेइज्जती गर्नुभयो । कम्युनिष्टको सत्यतथ्य बिचारलाई बेइज्जती गर्नुभयो ।
पुर्ण सफल नगरेर जनयुद्ध रोल्पा दलाल सडेगलेको पुजीँवादी दलाल व्यवस्थालाई बोलाएर १२ वुद्धे समाजद्वारी भारतमा गरेर बेइज्जती गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती गर्नुभयो । शत्रुको अगाडि रोएर कराएर बेइज्जती गर्नुभयो । राजनीति बिचारलाई बेइज्जती गर्नुभयो, जनयुद्धमा हिरो भएका तिमीहरू नेता जिरो भएर बेइज्जती गर्नुभयो सर्बहारा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बेइज्जती गर्नुभयो, यो भन्दा ठूलो गल्ती हाम्रो धर्तीमा हुदैन् ।
खुब सहयात्रीहरु लाई उथलपुथल गराएर ठूलो बने ठान्दछन् । हाम्रो क्रान्तिकारी शैक्षिक कार्यलाई बेइज्जती गर्नुभयो, हामी सधैँ नै यही शिक्षाप्रद विषयबारे बारम्बार चर्चा–परिचर्चा गर्ने गर्छौं । नौटंकी आदर्श छोडेर बेइज्जती गर्नुभयो, हाम्रा योद्धाहरुको मनोवृत्ति र आचरणमा हामी भविष्यको नव इतिहासको निर्मता मानवको झलक देख्न थालेका थियोे त्यो पनि बेइज्जती गर्नुभयो ।
हाम्रो इतिहासको हामीले गरेको योगदान र अन्य कालखण्डमा क्रान्तिकारी उद्देश्य प्रतिको सम्पूर्ण लगनशीलताले भरिपूर्ण कार्यहरुलाई दोहो¥याएर वास्तविकता हामीलाई भिडमा लिएर ‘अक्टोबर संकट दुरुस्त दुर्घटना गरेर सिंगो समाज अगाडि बेइज्जती गर्नुभयो । जस्तै प्लोराको तुफानको समयमा हामीले सम्पूर्ण जनसमुदायद्वारा गरिएका अनौठो वीरतापूर्ण र उत्तम बलिदानीपूर्ण कार्यहरु देखेका थिए । जनताले हामीले पनि पुर्णरुपमा आशा थियौ ।
जनमुक्ति सेनाले रातदिन नभनी दुःखको वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दैनिक जीवनका यस्ता वीरतापूर्ण संर्घष गरेका थियौ । मनोवल मनोवृत्तिहरुलाई श्रृंखलाबद्ध र स्थायी बनाउने बाटोको खोजी गर्नु नै हाम्रा आधारभूत काम कर्तव्यहरु माथि ठूलो घातक र बेइज्जती गर्नुभएको छ, केही नेतृत्व गतिला हुनेछैनौ । त्यही भएर पार्टी एकताबद्ध एकजुट हुन मेरो आग्रह छ ।
तिमीहरू नेतृत्व त क्युवाको क्रान्तिको इतिहासमा स्पष्ट रुपले परिभाषित हुन सकेनौं । नख–शिख र रुप रेखा सहित एउटा नयाँ बहुमुखी चरित्रको उदय भयो सोचेका थियौ हामीले त त्यो योगदान हो । जनता हो, जनता त इतिहासको मञ्चमा सुव्यवस्थित रुपले बारम्बार उदाइरहने गर्थे । अझै पनि उदाइमान छन् । हो त्यसरी नै नेपालमा बन्न सक्नु भएन् ।
यथार्थ के दाबी गरिन्छ भने यो बहुमुखी चरित्र भएको जनता भनेको समान श्रेणीका तत्वहरुको कुल जोड मात्रै हो, यिनीहरुले पाल्तु भेडा–बाख्राहरुले जस्तै व्यवहार गर्छन् । तर यथार्थ के हो भने जनता भनेका समान श्रेणीका तत्वहरु होइनन्, न त भेडा–बाख्राहरु नै हुन् । बरु प्रचण्ड लगायत सबै नेतृत्व कमरेडहरु बरु भेडा बाख्रा भन्दा झन्डै ठूलो उफ, उफ माथि प्रभुत्व जमाइरहेको अवस्थित अबस्थामा यो गल्दोबल्दो भएका छौ ।
एकताबद्ध हुनुहोस् धेरै ठूलो कसैले घमण्ड गर्ने होइन अहिलेको अबस्थामा केही कु राज्य–व्यवस्थाले केपी ओलीले रिगाइदिएको छ । केही कतैबाट केमा परिणत गराए एउटै श्रेणीमा गोठमा थुनेको भेडा–बाख्रालाई जस्तै कोचेर राखेको मात्र देखिएको किलेर प्रष्ट त्यही व्यवस्थामा यो टुटफुट महामारी दिनुदिन त्यहीँ स्थिति र अबस्थामा कहिले यता कहिले उता कहिले वर कहिले पर कारण कसको तपाईंहरुको कारण हो कमरेडहरु धेरै विचलित र विचलन होइन् बरु एकताबद्ध हुनुहोस् । म के कुरामा भन्छु भने सत्य यो हो भने जनता विना कुनै पनि हालतमा तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नु हुदैन् धेरै कोही नेतृत्वले पनि फुर्ती नहाके हुन्छ ।
म अर्को कुरा भन्छु भने त्यहीँ व्यवस्थालाई मान्नु आफ्ना नेताहरुको अनुशरण अनुसन्धान नगरेर हावा तालमा कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्नु हुदैन । नेता भयौं हामी भनेर धेरै कसै नेताले घमण्ड नगरे हुन्छ । तुरुन्तै कम्युनिष्ट एकताबद्ध औंषधी गर्नुहोस् होइन भने हामीले दिएको औंषधी उपचारले सन्चो गराछौ ।
विशेष गरी नेता नेतृत्व जनमुक्ति कमाण्डर हेक्का रहोस् जुन विशाल परिमाणमा तिमीहरूले यसरी जनविश्वासको घातक गर्यौ । त्यो दिन देखि ठेस लागेको छ तिमीहरूलाई धेरै ठूलो राजनीति गरेरमात्र हुदैन । कमरेडहरु तपाईंहरुलाई पुजींवाद र जनताले धोका दिनु बेर छैन तिमीहरू नाङ्गो हुन बेर छैन धेरै तेरो मेरो पार्टी भनेर कोही माओवादी नेता कोही जनमुक्ति नेता घमण्ड अहमद अहम्ता नदेखिएको जाती माओवादी एकता भएको जाती र बेष होला दुई चारजना नेताले गर्दा पार्टी फुटालेर उथलपुथल गएर नेपाली जनतालाई आर्जन गर्नुभएको होइन । एकताबद्ध आर्जन गरेको हो ।
तिमीहरू नेतृत्व भनिएका हेक्का रहोस् यो निश्चित रुपमा जनताका इच्छा र आकांक्षाहरुको सही अभिव्यक्तिको कारणले सम्भव भएको हो । बाहिर दलाल शक्तिको पछाडि नेपालका पुजींवादको पछाडि अघोषित बाँचाहरु भित्र पूरा चित्रण गर्नका लागि तिमीहरूले गर्नुको कारण के छ । अइमान्दारीपूर्ण पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भने गर्नुहोस । होइन भने उथलपुथल संघर्षको कारणले यसरी त्यसरी नै तिमीहरूको जनविश्वास प्राप्त गर्न असफल हुनेछ । त्यहीँ भएर सबै एकपटक आलोचना गरेर अगाडि बढौ भने यस्तो पार्टी बन्छ । यस्तो पार्टी कुरै छोड्नु होस आनविक मिसायल पार्टी हुनेछ ।
भाषणमा मात्र सिमित होईन पार्टी उथलपुथल भएर होईन एकताबद्ध भएर प्रमाणु र दाइनामिक पार्टी हुनुपर्छ । तिमीहरू उथलपुथल राजनीतिलाई म एउटा डाइलक दिन्छ । स्वार्थको कम्युनिष्ट राजनीति धेरै माथि भयो र अथवा स्वार्थको लागि लागेपछि साच्चिकै सच्चा नेता नेता भन्दा भन्दा नेताहरू साच्चिकै बौलाहा भए भने सहरमा भिक माग्ने राजनीति गर्छन् कि क्या हो । होइन भने तुरुन्तै एकताबद्ध पार्टी हुनुहोस् मेरो अनुरोध मेरो आग्रह छ ।
उदाहरण एमाले बाट सिक के भन्ने यिनी नेताहरूलाई सोच्नु होस त एकपटक नैतिकता हैसियत भएपछि एकताबद्ध हुनुहोस् । होइन भने नेतृत्व गर्न पार्टी चलाउन एकताबद्ध हुन सकिदैन भने म एउटा ठूलो चेतावनी दिन्छ, । के दिन्छु भने सबै जति जति केन्द्र देखि दुई स्टेप तल नेतृत्वले काठमाडौको पुशुपती मन्दिर लगायत नेपाल सबै बजार मन्दिर खोज्दै जोगी जस्तो हुदैन खरानी दल्दै गरेर हिड होइन भने नैतिकता छ । भने मैले लेखेको न्युज हेरेर दिमागमा शिरफुल फुलोेस् ।
अर्को शक्तिशाली पार्टी टुटफुट गरेर के नै ल्याउला केही खाउला जस्तो गर्छौ । पुरानो व्यवस्थाका रिटाउनीहरु प्लाया गिरोनका वीरतापूर्णको सरणार्थी किन गर्नुहुन्छ । बेइज्जती तपाईंहरुको अनुभवहरु चोरेर अगाडि बढे हजुरहरुलाई चिनिया जनताले बनाएको काटनु र बाटुनीङ बन्नु परेको होला भन्छु ।
सबै नेतृत्व अब गल्तीहरु सुधार्ने समय भनेको यही बेला हो गल्तीहरु सच्याएर एसकालान्तेद्वारा पार्टी माथि थोपारिएको संकीर्णतावादी नीतिको परिणाम स्वरुप गल्तीहरु सच्याएर अब आउने दिनहरूमा नदोरिएर अगाडि बढ्न सबै नेतालाई आग्रह छ, । बिगतमा के भयो के थिए सबै बिर्सिएर नयाँ शक्तिशाली बन्नुपर्छ ।
बिगतका त्रुटीहरु बिगतका दिनबाट कति घात भयो भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुनहुन्छ । भने संवेदनशील उपाय र समझदारीपूर्ण कदमहरुको कडी बनाइराख्नका लागि यस प्रकारका षडयन्त्रहरु मात्रै काफी छैनन् । यसका लागि जनतासंग अझ बेसी संगठनिक सम्बन्धको विकास गर्नु जरुरी छ । आगामी दिन वर्षहरुमा हामीले यसलाई बलियो पार्टी बनाएर सम्बन्धलाई अझ घनिभूत र विस्तृत पार्नु आवश्यक छ । जुन मानिसहरु क्रान्तिकारी अनुभवको बीच बाटोबाट अगाडि बढेका छैनन् । उनीहरुका लागि व्यक्ति र जनसमूहबीचको द्वन्द्वात्मक एकताले भरिएको त्यस स्थिति राम्ररी बुझ्न कठिन हुनेछ । त्यस्तो द्वन्द्वात्मकताको स्थितिमा व्यक्ति र जनसमूह दुबै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्, अनि समग्रह रुपमा व्यक्ति–व्यक्तिहरु मिलेर बनेको जनसमूह पनि नेताहरुसंग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
पूजींवाद अन्तर्गत पनि यस प्रकारको एकताको झलक कहिले काहीँ देख्न पाइन्छ । विशेष गरी जनमत परिचालन गर्ने क्षमता भएका राजनीतिज्ञहरु मञ्चमा देखा पर्दा यस्तो हुन्छ । तर त्यो परिचालन चाहिँ धेरै जसो साँच्चैको सामाजिक आन्दोलासंग सम्बन्धित क्रियाकलाप हुँदैन । यदि यो सामाजिक आन्दोलान अन्तर्गतको क्रियाकलाप नै भए पनि त्यसलाई पूजींवाद अन्तर्गतको क्रियाकलाप भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यो परिचालन साँच्चैको सामाजिक आन्दोलान नहुने हुनाले परिचालनकर्ताको जीवनकालसम्म मात्रै त्यो अगाडि बढ्छ । त्यो पनि पूजींवादी समाजका क्रुरताहरुको बारेमा जनताबीच भ्रान्ति रहेसम्म मात्रै ।
पुँजीवाद अन्तर्गत व्यक्तिको जीवन एउटा त्यस्तो निर्मम र कठोर विधानले बाँधिएको हुन्छ । जुन सामान्यतः व्यक्तिको बोध–क्षमताभन्दा अलि टाढै हुन्छ । घना एक्लोपनाको भारी बोक्दै त्यो व्यक्ति समग्ररुपमा एउटा त्यस्तो अदृश्य धागोद्वारा समाजसंग बाँधिएको हुन्छ । जसलाई मूल्यको विधान भनिन्छ । यही अदृश्य मूल्य–विधानले व्यक्तिको जीवनका सबै पक्षहरु माथि प्रभाव पार्छ । त्यसैले देशको साथीहरूको जीवनको बाटो त्यही भएर सबै मेरो आग्रह छ अझै केही बिग्रिएको छैन गर्नुहोस र भविष्यको भाग्यको निर्माण गर्नुहोस् ।
पुजींवादका विधानहरु अन्धा हुन्छन् र अधिकांश मानिसहरुका लागि अदृश्य हुन्छन् । तर तिनै विधानहरु व्यक्तिको मन–मस्तिष्क भित्र पसेर, त्यस विषयसम्बन्धी उसको चेतना विना नै क्रियाशील रहन्छन् । व्यक्तिले त पुजींवादी क्षितिजको विशालता मात्रै देख्न पाउँछ । जुन हेर्दा खेरि अनन्त जस्तो देखिन्छ । पुजींवादी प्रचार माध्यमहरुले विलकुल यसरी नै सफलताको कथा प्रस्तुत गर्छन् ।
पुजींवादमा जुनसुकै मामिलामा पनि हामीले सफलताको लक्ष्यसंग जोडिएको एउटा अवरुद्ध बाटो देख्छौं । त्यो बाटोमा नलाग्न मेरो आग्रह छ । लक्ष्यसम्म पुग्न सफल हुनका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि, तागत र गुणहरुले सम्पन्न व्यक्तिले मात्र हिड्न सक्दैन ।
तर अर्कोतिर विदेशी उत्पीडतहरुका विरुद्ध मुक्ति संग्रहमहरु पनि चलिरहेका छन् । युद्ध जस्ता बाहिरी कारणहरुले जन्माउने दुर्गति र यन्त्रणा, सुविधा भोगी वर्गद्वारा शोषितहरुमाथि भइरहेको उत्पीडन विरुद्ध यस्ता संघर्षहरु अगाडि बढिरहेका छन् । नवउपनिवेशी शासनहरुलाई उखेलेर फ्याँक्ने उद्देश्य सहित पनि मुक्ति संग्रहमहरु चलिरहेका छन् । यस्तो परम्परागत संघर्षहरुले पूजींवादको विस्फोटन प्रक्रियालाई टेवा दिइरहेका छैनन् । हामीले जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले जनतालाई परिचालन गर्नका लागि सही माध्यम, सही प्रक्रिया र ठीक उपायको छनौट अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
भौतिक प्रोत्साहनको सही उपयोगलाई नविर्सिकन, विशेषगरी सामाजिक प्रकृतिको भौतिक प्रोत्साहनको सही उपयोगलाई नविर्सिकन भन्ने हो । भने स्पष्ट शब्दमा भन्न सकिन्छ । त्यो सही माध्यम भनेको आधारभूत रुपमा दिन सक्नु भएन प्रचण्ड लगायत सबै नेतृत्व कमरेडहरुले । अब आउने दिनहरूमा पुजीवादको बाटो लामो छ अराजकता कठिनाइहरुले भरिपूर्ण छ दलाल संग हामीले कहिले काहीँ त्यो बाटो बिराउन सक्छौं । दलाल पुजींवादी व्यवस्थाबाट टाढा हट्नुपर्ने हुन्छ ।
समाजवादको निर्माणका लागि नैतिक प्रोत्साहनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै हामीले चेतनास्तर फरक–फरक भएका समूहहरुको उपस्थितिलाई पनि विशेष याद गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा समाजवादको निर्माण कार्यमा भाग नलिने मुठ्ठीभर मानिसहरुलाई एकातिर पन्छाएर हेर्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ । अगुवाहरु र जनताहरुबीचको सामाजिक चेतनामा समानुपातिक विकास भएको छैन । जनताको तुलनामा वैचारिक रुपले अगाडि छैनन र जनतालाई नयाँ जीवनका मूल्य–मान्यताहरु सम्बन्धी जानकारी दिन सक्नु हुदैन ।
तर दलालहरुका त्यसबाट ठेष्ट मात्रामा परिचित भनेको छैनौ कमरेड । तपाईंको पोहिल गएको पार्टी दलाल अगुवाहरुमा उनीहरुको अग्रिम दस्ताको उत्तरदायित्वको कारणले गुणात्मक परिवर्तन आउँन सक्दैन कमरेड यसले उनीहरुमा बलिदान हुने क्षमता प्रदान छैन् । तर जनताभने वस्तुको एक अंशमात्र देख्न सक्ने हुनाले दुविधाग्रस्त हुन्छन् । बनाउने बाएक अरु कुनै विकल्प छैन् । त्यसैले उनीहरुलाई प्रोत्साणहरु र सीमित घनत्वका दवावहरुको आवश्यकता रहन्छ । हो यही हो सर्वहारा वर्गको तानाशाही भनेको ।
सर्वहारा वर्गमाथि तानाशाही केवल पराजित मात्रै लागू हुने हो तिमीहरू । हाम्रो कर्तव्य हो, विवादहरुमा नराम्ररी फँसिरहेको वर्तमान पुस्तालाई विकृत हुनबाट रोक्नु र मुना झैं टुसाइरहेको नयाँ पुस्तालाई विसंगत हुनबाट रोक्नु पर्छ । जसरी पनि सबै नेतृत्व कमरेडहरुले सबै नेतृत्वले अन्न खानु हुन्छ । भने हाम्रो कम्युनिष्ट समाजमा युवाहरु र पार्टी दुबैको भूमिका महत्वपूर्ण नहुनुको कारण के छ कमरेडहरु दम्म र घमण्ड छ । जसरी हामीले उत्तर खोजेका छा ।
सबै कमरेडहरु तपाईहरु नेतृत्व हो युवाहरुको भूमिका विशेष रुपमा महत्वपूर्ण छ । किनकि हामीहरु भनेका मलिलो नरम माटो हो । जुन माटोबाट पुराना गल्ती–कमजोरीहरुबाट मुक्त मानवको सिर्जना गर्न सक्छौ । हामीले आफ्नो उच्च अभिलाषा अनुरुप हामी युवाहरु तपाईंहरुको साथ सपोट दिने निर्माण गर्न तपाईंहरुको हाम्रो योगदानको नेतृत्व अझै पनि हुनुपर्छ । अगाडि हामीलाई लैजानु पर्छ ।
माओवादी पार्टी भनेको अगुवा संगठन हो । यो सबैभन्दा गरिब सर्वहारा वर्ग बाट उत्पादन शक्तिशाली हौ । हामी पार्टी श्रमिकहरुबाट बनेको हुन्छौं । हाम्रो देशका प्रत्येक जनमुक्ति युवालाई राम्ररी थाहा छ जुन युगमा उनीहरु बाँचिरहेका छन् । त्यो युग बलिदानको युग हो । हामी बलिदानबाट परिचित छौं । हामी योगदान बलिदानसंग परिचित भएका थियौं । आफ्नो देशभित्र पनि नेताहरुले आफ्नो अगुवाको भूमिका खेल्नुपर्छ । सम्पूर्ण इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । पुजींवादी दलालका पछि लाग्ने नेताहरुका पनि भर्खरै बोली फुट्न लागेका बालबच्चाहरु जस्ता छन । तिनीहरु तोतेबोलीमा भर्खर भर्खर आमा र बा भन्न सिक्दै छन् ।
मैले सुनेको थिए बिचारको युद्धको कुनै आखाँ हुदैन भनेर ।।
सत्तामा सुनेको थिए दमनको कुनै धुनको भाका हुदैन भनेर ।।
जनमुक्ति युवा क्रान्तिकारी साथी भाइ बिचको दरार भयो ।।
मैले सुनेको थिए सच्चा कम्युनिष्टको मन कहिल्यै पाखा हुदैन ।।
निश्चित रुपमा वर्तमान परिस्थितिमा धेरै खतराहरु छन् । हामी वैज्ञानिक समाजवादी युवा बेसी स्वतन्त्र र खुुसी छौं किनकि हामी धेरै सन्तुष्ट छौं । हामी बेसी सन्तुष्ट छौं, किनकि हामी धेरै स्वतन्त्र छौं । हामीले पुरानो बाटो लक्ष्य उदेश्य छोड्नु हुदैन् कुनै हातमा पनि, अनि मात्र बलियो शक्तिको निर्मता पार्टी बन्छ ।
हाम्रो सम्पूर्ण माओवादी स्वतन्त्रताको ढाँचा निर्माण भइसकेको हुनुपर्छ । जसरी पनि कमरेडहरु तपाईंहरुको साथ हाम्रो छ । क्रान्ति र दैनिक सुरक्षाका लागि हाम्रो रगत र बलिदानको आवश्यकता अझै बाँकी छ । हाम्रो बलिदान सचेतनापूर्वक हुन्छ । हाम्रो बलिदान विवेकले पोलिसी हतियार हामीले निर्माण गरिरहेका स्वतन्त्रत जनताको अधिकार लागि पुजींवादी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी शक्तिलाई पाखा लगाउनुपर्छ ।
हाम्रो बाटो लामो छ र आटले पुर्णरुपमा हाम्रो बाटो अज्ञात पनि छ । हामी हाम्रा सीमाहरुप्रति सचेत छौं । पुजींवादलाई हामीहरुले एक्काइसौं शताब्दीको मानव सिर्जना गर्नेछौं । हो हामी आफैंले कम्युनिष्टको उदयमान गर्नुपर्छ । भन्ने आट गर्नुहोस् हामी जनमुक्ति युवाले साथ दिनेछौं । पुजींवादी व्यवस्थाका बिरुद्ध हामीले बिचार दैनिक कारबाहीको अग्निपरीक्षामा होमिएर हामी पार्टीलाई स्पात बनाउनेछौं । भन्ने आट गर्नुहोस् एउटा नयाँ प्रविधियुक्त क्यापिसिटीले पुरानो व्यवस्थालाई फाल्ने आट गर्नु होस् नेतृत्व कमरेडहरु हामीले साथ दिनेछौं ।
नेतृत्व कमरेडहरु तपाइहरुलाई पुजींवादी व्यक्तिले किनेर भ्रष्टाचारमा परिचालन र नेतृत्वको भूमिका त्यति हदसम्म मात्र नखेल्न मेरो हृदय देखि अनुरोध छ । केही मान्छेलाई सकेन एमाले ले तपाईंको अपहरण अपेहलना जति हदसम्म तपाईंका जनताका सर्वोच्च गुणहरु उच्च अभिलाषाहरु बोक्न सक्छन । अब कमरेडहरुर बाटोमा दिग्भ्रमित नभैकन अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । र अगाडि एकताबद्ध भएर सबैलाई जान मेरो आग्रह छ ।
तपाईंहरुलाई पछाडि जसरी पनि पारेर छोडे बाटो पहिल्याउने, त्यसबारे स्पष्टता हाँसिल गर्ने काम भनेको अगुवा समूहको कर्तव्य हो । तपाईंहरुका मध्ये पनि सर्वोत्तम व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् पार्टीको कर्तव्य बिस्तारै पलाएन भएर सकाउनु भयो । कमरेडहरु तपाईहरु त कुनै बेला महान नेता हुनुहुन्थ्यो । अहिले त जिरोमा परिणत भएको छौ ।
राम्रोसँग समीक्षा गर होइन भने तिमीहरूको शक्ति बिस्तारै पलाएन हुन्छ । हामी पनि बिस्तारै बिर्सनु पर्ने अबस्थामा आउछु । सबै माओवादी भाईहरु एकीकृत हाम्रो काम कारबाहीका लागि आधारभूत मलिलो माटो भनेका हामी युवाहरु नेतृत्वको साथ र सपोट तिर छौ । हामीले कम्युनिष्टको असली खोल आफ्नो आशा र विश्वास अड्याइराखेका छौं ।
र हाम्रा हातहरुमा फरफराइरहेका झण्डाहरु थाम्न सक्षम पार्नका लागि हामीहरुलाई तम्तयार पार्दै अगाडि बढ्ने शक्तिशाली दिमाग छ । सबै नेतृत्व कमरेडहरु एकढिक्का हुन अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता छ ।
आउ हसाउने छौं क्रान्तिमा रुन दिने छैनौ नेताहरु
हामीबाट क्रान्तिको अभाव हुन दिने छैनौ नेताहरू
आउ नेतृत्व साथीहरु हात समाउ जनतालाई साथ सपोट दिनुपर्छ
आउ छोडी जान्न दिन्नौ क्रान्ती रोक्ने दिने छैनौ नेताहरू
हाम्रो उदेश्य भनेको उत्तरी दलालसँग हातेमालो नहोस् नजाओस् भन्ने मात्र हो । दस बर्ष जनयुद्ध लडेर काठमाडौ पु¥याउने हामी जनमुक्ति सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छ सबै माओवादी नेतृत्वलाई दश बर्ष हामी बर्गसंर्घष आत्मा संर्घष मैत्रीपूर्ण संर्घष गरेर हामीले पुर्याउनु हाम्रो ठूलो योगदान सहयात्री प्रति अपमान नगरियोस् ।
दश बर्ष जनयुद्ध हामीले दुःख कष्टकर भोग्यौ तपाईंहरू जति पनि नेतृत्व हुनुहुन्छ नि दश बर्षको संर्घषले दश वटा पार्टी खोल्दै नजानुहोस मेरो अनुरोध र आग्रह छ ।
जाजरकोटी सन्दर्भ घायल जाजरकाेटकाे कुशे गाउँपालिकाका समाजसेवी हुन् ।
हाल कार्यरत मलेसियामा छन् ।